imisebenzi Rikooo kaThixo iinqwelo- akukho in prepar 3d v4
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #643 by brunoeduardo
Abanye iindaba kwinguqulelo entsha ye prepar 3d v4?
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #663 by Ihlazo
Isihloko esingundoqo asichanekanga, sibonakala ngathi zonke iindiza zeRioo FSX zingasebenzi.
URio akayena umcebisi oyintloko we-addons. Ininzi yeenqwelo zezixhobo zeFSX NATIVE kwi-P3D V4, nokuba yintsusa okanye ifakwe ngu-Rikoo. Kodwa i-FS9 ezikhupha iinqwelo-moya azisebenzi.
iinyanga 1 kunyaka 7 eyadlulayo #667 by Macca22au
Abafana, bambalwa okanye akukho FSX okanye i-FS2004 indiza iya kusebenza kwi-P3Dv4.
Ininzi ye-P3d v3, ngokukodwa iindiza ezinzima kunye ne-FMC ayisebenzi ku-P3D4
Isakhiwo se-64bit se-P3D4, sithetha ukuba ezinye iinqwelo-moya, indawo enjalo njl.
Ndiyabongoza abalobi bezinto ezininzi zokulanda apha ukuba basebenze ekuhlaziyeni zabo izongezo.
iinyanga 11 kwiveki 1 eyadlulayo #946 by DRCW
Kwanjalo noChris Evens uye waqaphela konke okwenzayo kwaye akakho xa ekhulula inqwelo-moya asebenzayo kwi-V4. Ukuqonda oko, kufuneka uvumele ukuba ezi bugs zifezekiswe, enye enye. Inqwelo enye iya kusebenza xa abanye bengenayo, yinto elula. Khipha nayiphi na into engasebenzi kwaye ibangela ukuphazamiseka. Linda iifom, ufunde iifom, uze ubukele abo bazinikezela ubomi babo kwi-freeware. Uninzi lwezi mpazamo zitshintsho kwikhowudi ephendulela i-P3D kwi-32 bit kwi 64. Ekugqibeleni kuya kulungela. Iifoto eziqinisekileyo ze-FSW ... Iifayile ezibonakalayo zibonakala zonke zisebenza ku-P3D v4. Ndakwazi ukukhuphela yonke indawo yam ifoto. Oku kungenxa yeefayile ezibonakalayo azikho ngaphezu kweempawu xa iindiza zibandakanya kakhulu ukusebenza kunye neifomula.
Ixesha ukwenza page: 0.109 imizuzwana